Naghachi data Outlook si na Virtual Machine Disk Files, Ndabere faịlụ na diski Image faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Naghachi data Outlook si na Virtual Machine Disk Files, Ndabere faịlụ na diski Image faịlụ
Ọ bụrụ na gị Outlook PST /OST echekwara faịlị na faịlụ ndị a:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) faịlụ (*. Vmdk). Iji maa atụ, ị na-echekwa Outlook PST / gịOST faịlụ na diski mebere na VMWare.
PC VHD Virtual (Virtual Hard Disk) faịlụ (*. Vhd). Iji maa atụ, ị na-echekwa Outlook PST / gịOST faịlụ na mebere disk na Virtual PC. Ma ọ bụ ị na-eme ndabere nke gị Outlook PST /OST faịlụ site na Windows ndabere na Weghachi ọrụ.
Disk oyiyi faịlụ (*. Img)
CD / DVD oyiyi faịlụ (*. Biini)
Mmanya na-aba n'anya 120% Mirror Disk File (MDF) faịlụ (*. Mdf)
na ịnweghị ike ịnweta data dị na PST /OST faịlụ n'ihi ihe ụfọdụ, ọmụmaatụ:
Delete hichapụ gị Outlook PST /OST faịlụ site na diski mebere na VMWare ma ọ bụ Virtual PC.
The ndabere faịlụ na nkwado ndabere na mpaghara media rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi na ị na-enweghị ike iweghachi gị PST /OST faịlụ na ya.
The disk oyiyi faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi ma ị nweghị ike weghachite gị PST /OST faịlụ na ya.
Mgbe ahụ ị ka nwere ike ịgbake data na PST /OST faịlụ site na ịgụ isiokwu na-agbake kwekọrọ ekwekọ igwe disk faịlụ, ndabere faịlụ ma ọ bụ disk oyiyi faịlụ na DataNumen Outlook Repair. Naanị họrọ faịlụ faịlị igwe arụmọrụ, faịlụ nkwado ndabere ma ọ bụ faịlụ diski dị ka isi iyi faịlụ ka emezie, DataNumen Outlook Repair ga-enyocha faịlụ isi, nyochaa ya, weghachite data Outlook echekwara na faịlụ ahụ, wee wepụta ya na faịlụ PST ọhụrụ.
Ọ bụrụ na gị Outlook PST /OST echekwara faịlụ na diski ike ma ọ bụ draịva, ịnweghị ike ịnweta PST /OST faịlụ n'ihi ihe ụfọdụ, ọmụmaatụ:
Delete hichapụ gị Outlook PST /OST faịlụ site na diski ike ma ọ bụ draịva.
Mgbe ahụ i nwere ike iji DataNumen Disk Image imepụta ihe oyiyi nke diski ike ma ọ bụ draịva, wee nwetaghachi PST /OST data site na ihe oyiyi faịlụ na DataNumen Outlook Repair.